Ny Pos Rose (Sigur Rós, ASD: ['siɰør roʊs]) dia ny Zavatra post-rock music tarika amin'ny minimalist, ambient sy shoegazing angon-drakitra. Ny anarany dia midika hoe Zavatra rose fandresena.
2 Mpikambana ao amin'ny Tarika
2.1 Teo Aloha, Ny Mpikambana Ao
3.2 Tokan-tena sy Ep
3.3 Asa hafa
4 Endrika ivelany any Gresy
Ny Jørgen Thor Birginson (Jón Þór (Jónsi) Birgisson), Georg Holm (Georg Andriamanitra) sy Auguste Evar Gunnarsson (Ágúst Ævar Gunnarsson) namorona ny vondrona ao Reykjavík tamin'ny aogositra 1994. Ny anarany dia avy amin'ny rahavavy ny Yonsi, Sigurros (Sigurrós), izay teraka tamin'izany andro izany. Vao nahazo ny fifanarahana an-tsoratra iray ao an-toerana marika an-tsoratra, ny Kiboriny Hanandrana (Ratsy Tsiro). Tamin'ny taona 1997 dia namoaka Von (Manantena) sy tamin'ny taona 1998 ny fanangonana ny remixes ny anarana Von brigði dia Zavatra kilalaon-teny: Vonbrigði midika fahadisoam-panantenana, saingy Von brigði midika fanovana ny fanantenana.
Ny fankatoavana iraisampirenena tonga amin'ny Ágætis Byrjun (tsara-piandohana) amin'ny taona 1999 izay ny tarika niara-niasa tamin'ny Kjartan Sveinsson. Ny laza ny rakikirany niparitaka tamin'ny am-bava nandritra ny roa taona manaraka. Ny ankamaroan'ireo tsikera eran-tany no lazaina ho iray amin'ireo tsara indrindra albums ny vanim-potoana, ary tena tsy ho ela ny tarika dia ny milalao miaraka amin'ny Radiohead sy ny lehibe hafa anarana ao amin'ny vatolampy sy ny sehatra hafa. Hira roa, ny voalohany tokana ny Ágætis Byrjun, Svefn-h-englar sy ny velona ny fampisehoana nivoaka mbola "Njósnavélin" (taty aoriana dia lasa "tsy misy anarana #4") niseho tany amin'ny horonan-tsary ' ny Cameron Crowe, Lavanila Lanitra.
Taorian'ny famoahana ny Ágætis Byrjun, ny tarika dia lasa bebe kokoa ho fantatra ny fomba milalao ny gitara avy amin'ny Μπίργκισσον amin'ny tsipìka, lokangabe, matsilo elektronika reverb, famoronana mamafa, ranon-javatra feo tsy manam-paharoa ny herinaratra gitara.
Ny Sigur Rós fampisehoana ao Amsterdam, ny 2013.
Ny drummer Auguste nandao ny tarika rehefa avy ny fandraisam-peo ny Ágætis Byrjun ary nosoloana amin'ny Teny Παλλ Ντύρασον (Orri Páll Dýrason). Tamin'ny 2002 nandrasana hatry ny ela manaraka rakikira navoaka tsy ny anaram-boninahitra ary dia fantatra tsotra amin'ny hoe ( ), amin'ny endriny roa izay mijery toy ny fononteny mahitsizoro sy ny handrakotra ny kapila amin'ny dikan rehetra. Tsy misy voatondro anaram-boninahitra nandritra ny valo hira ny rakikira. Ny tononkira dia ao Hopelandic, ny solon - teny, namorona ny Birginsson mba mitovy ny feo avy amin'ny teny Islandey.
Ny oktobra, ny taona 2003 ny Sigur Rós no hita amin'ny Radiohead mba hanoratra ny mozika ny seho, Nizara roa Tonta ny Merce Cunningham. Ny sekely telo ny Sigur Rós ary no atao hoe Ba Ba, Ti Ki, Di Manao sy namoaka azy tamin'ny Martsa ny taona 2004. Koa ny rakikira voalohany, Von , navoaka farany ao amin'ny ETAZONIA sy ny tany grande-Bretagne tamin'ny oktobra 2004. Ny fomba ny rakikira vaovao, Takk...(Isaorana...) dia any amin'ny eo ny mifanaraka roa lehibe ny boky. Navoaka tamin'ny 12 septambra 2005, raha ny voalohany tokana ny rakikira, Glósóli, dia azo jerena amin'ny alalan'ny aterineto avy ny 15 aogositra. Ny Sæglópur natao tamin'ny 16 aogositra noho ny Βορειοαμερικανικούς namana ny tarika. Ny faharoa tokana ny rakikira, Hoppípolla, navoaka tamin'ny 28 novambra miaraka amin'ny alefa ny Hafsól, hira avy amin'ny rakikira voalohany, Of.
Ny Hoppípolla ary be dia be ny hira ao amin'ny tahirin-tsary dia ampiasaina amin'ny dokam-barotra sy ny hafa fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny fampielezam-peo, dia toy izany no mampitombo ny vahoaka no tombontsoa ho an'ny tarika sy ny fampitomboana ny fikorianan'ny mitovy Hoppípolla, nanery EMI ny fanemorana ny famoahana ny Sæglópur EP. Ny Sæglópur farany, any amin'ny ankamaroan'ny firenena eto amin'izao tontolo izao navoaka tamin'ny 10 jolay sy ahitana hira vaovao telo (Refur, Ó Fridur, ary Kafari).
Mpikambana ao amin'ny TarikaHanova
Jón Þór "Jónsi" Birgisson: vocals/gitara
Georg "Goggi" Hólm: bass
Orri Páll Dýrason: ny amponga (hatramin'ny 1999)
Teo Aloha, Ny Mpikambana AoHanova
Ágúst Ævar Gunnarsson: ny amponga (1994-1999)
Kjartan "Kjarri" Sveinsson: fanalahidy (1998-2013)
Tokan-tena sy EpHanova
Tsy Misy Anarana #1 (A. K. A. Vaka) (2003)
Ba Ba Ti Ki Di Manao (2004)
Fananana Feonkira (2002)
Endrika ivelany any GresyHanova
1 Jolay 2003 - Trano Rock, Athens
13 Jona 2016 - Rano-Kianja (Fanafahana Athens Fety), Athens
Ny firaka mpihira, Jónsi no jamba amin'ny maso iray ary hoy ny lehilahy miray amin'ny lehilahy.
Ny tady ny hira Starálfur dia reciprocating. Dia ho toa izany koa raha ny tokony ho izy sy ambony ambany.
Ny hira voalohany voarakitra ho an'ny rakikira Agætis Byrjun dia manara-maso ny anaram-boninahitra, izay rehefa izany dia voarakitra, nomena ny namana iray ny tarika mba hilaza aminao izay hevitrao. Ny fanehoan-kevitra dia ny hoe izany no tsara fanombohana (Agætis Byrjun), ary avy teo dia naka ny anarana na ny hira aza sy ny rakikira.
Miverina ho amin'ny firaketana ny rakikira voalohany, Von, hoso-doko ao amin'ny studio.
Valo ambin'ny folo Segondra Alohan'ny fiposahan'ny masoandro - tranonkala Ofisialy, ahitana be dia be ny hira sy ny video loharanom-baovao.
Pejy Σίγκουρ Ross amin'ny musicOMH.com
↑ «Icelandic rock».
↑ Price, Simon (July 17, 2005).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigur_Rós&oldid=795070"
Dernière modification le 14 Janoary 2017, à 17:09
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 17:09 ity pejy ity.